ဤခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအဓိကအရာများ - Your Brain On Porn
ကောင်းပြီဂိုဏ်းငါခြေလက်ပေါ် ထွက်. ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကိုယ့်ကိုယ်ကို pronouce ဂုဏ်နဖြစ်၏။ ငါသည်ဤ site ကိုဒီမှာတွဲလွဲဆွဲထားသူကိုရှေးရှေး၏ကြီးစွာသောအုပ်စုတစ်စုတွေ့ကြပြီဒါကျေးဇူးတင်ခံစားရတယ်။ ငါ့အသက်ကိုဤအရပ်၌ဖြန့်ချိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်းငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏အဓိကပြissueနာမှာ endocrine ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်မမျှတမှုမရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးသောက်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ED ပုံစံဖြင့်ခေါင်းကိုက်လာသည်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးအခက်ခဲဆုံးစိုက်ထူရပေမယ့်ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးလိုအပ်အဖြစ်ဘို့နောက်ဆုံးမှအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့အံ့သြဖွယ် (ငါနဲ့ငါ့ဇနီး) စွမ်းရည်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်မသာကြောင်းအစီရင်ခံရန်ဝမ်းသာတယ်။ Ive 60 ပေါင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့် Ive အစဉ်အဆက်ခဲ့သည်အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဍာန်အချို့အတွက်ဖြစ်၏။
1 ။ ဒီနေရာမှာပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ပါ။ ကိုယ့်စတင်မယ့်အစား၏ထက်ဝက်က assing နေသငျ့လျြောသော reboot ပြုမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရှိရာသို့အလျင်အမြန်အနာကိုငြိမ်းစေပြီနိုင်ဘူး။
2 ။ သင်တစ်ဦးလိင်တံရှိ dont ဟန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ O. မှဆောင်ကစားများနှင့်ကစားရန်ဆောင်ထိ
3 ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကသင့်စလစ် ups အပြစ်ကိုသည်းခံကြလော့။ ဒါဟာအားနည်းချက်အချိန်လေးများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပေးရန်သင့်အားကောင်းသောအရာမပါဘူး။ ဤအချိန်ကြာခြင်းနှင့်သဘာဝ Linear မထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်မလွှတ်အပေါ်ရွှေ့နှင့်ကြမ်းနေဖို့။
4 ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူအာရုံစိုက်။ သင်သည်သင်၏အသက်တာမှသူတို့ကိုပြန်သွားကြသည်နှင့်ပပျောက်စေဖွယ်ရှိသောအခြေအနေများနှင့်သို့မဟုတ်တ္ထုများသတိပြုပါ။ ကကြာကားအဘယ်သို့လျှင်အစားအစာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့။ Whining နှင့်ကိုယ်ပိုင်သနားဘာမျှမစုံ။ သင်ရုံမယ့်အစားအတူတူပင်အမှုအရာလုပ်နေတာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို set up ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပါဝါရှိသည်။
5 ။ ငါ 1 ကောင်းသောလိင်များအတွက် key ကို component တစ်ခု (သို့မဟုတ်ရုံကောင်းတစ်ဦးစိုက်ထူ) ပေးခဲ့ရသည်လျှင်အပန်းဖြေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကဆူညံစိတ်ကိုတစ်ဦးအားလျော့လိင်တံ (သို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်) အတွက်စေသည်။ အသက်ရှူခြင်းနှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သင်ခံစားနေကြသာယာသောခန္ဓာကိုယ်အာရုံပေါ်မှာလုံးဝအာရုံစိုက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ!
6. ဒီတစ်ခုဖြည့်စွက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်သောကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာသင်၏အထီးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပြီးကုန်လွန်သွားပါက horney ဆိတ်ပေါင်းပင်၊ Tribulus maca၊ yohimbe စသည့်“ အထီးမြှင့်တင်ခြင်း” ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်လုံးဝအသုံးမကျဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ထပ်တိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေနေသည့်ပုံမှန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေမဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများအားငြင်းခုံဆွေးနွေးပါမည်။
ဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သော citicholine အဖြစ် enhancers (dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့ purported) နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်နဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကအတူတူပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ serotonin စသည်တို့ကိုငါ့ကို bitchy တုန်သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့သောတူညီသောရလဒ်အပေါငျးတို့သသွင်းယူမူကွဲမြှင့်တင်ရန် dopamine သို့မဟုတ် 5-htp မြှင့်တင်ရန်ထိုကဲ့သို့သောဌ-tyrosine သို့မဟုတ်ဌ-phenylalanine အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော neurotransmitters ဖို့အမိုင်နိုရှေ့ယူပြီး။ သူတို့ကငါ့ကို0အပြုသဘောရလာဒ်များကိုပေး၏။
အဆိုပါဖြည့်စွက်ဖို့ချွင်းချက်ရဲတဦးကိုအချည်းနှီးဆောင်ပုဒ်များမှာဂါဘမြို့သားများနှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါမိုင်နိုအက်စစ်ယူပြီးစတင် (က vasodilator နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဖို့ရှေ့ပြေးဖြစ်သော) 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ် (နံနက်, မွန်းတည်နှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်အိပ်ရာမဝင်မီ) နှင့်ဂါဘမြို့သား 1000mg3ကြိမ်နေ့စဉ်နှင့်ရက်အတွင်းတစ်အံ့သြစရာခြားနားချက်သတိပြုမိသည်။ ဂါဘမြို့သားကအနည်းဆုံးအကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်ထဲမှာချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့သလိုပဲဦးနှောက်နှင့်ငါ့အဘို့ inhibitor အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အတော်များများကအခြားသူများက 3000mg ၏ဆေးညွှန်းမှာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလုပ်နိုင်ယုံကြည်နေချိန်မှာပါးစပ်ဂါဘမြို့သားနေ့စဉ်အသှေးကိုဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်လို့မရဘူးနှင့်နေဆဲအခြားသူတွေက pituitary gland ကနေတဆင့်ဦးနှောက်တစ်ကျောတံခါးကိုတွေ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ယုံကြည်
ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုငြိမ်သက်စေပြီးဗဟိုပြုတယ်။ အိပ်ချိန်လည်းကောင်းတယ်၊ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါ့ရဲ့တစ်နေ့တာမှာအလိုအလျောက် Semi Erections စတင်ခဲ့တယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးမျိုးသောဖြည့်စွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကြခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းပွင့်လင်းသောစိတ်နှင့်သူတို့ကိုယူပေမယ့်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်လူသားမဆိုဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ကျွန်တော့်အတွက် GABA နဲ့ Arginine အတူတကွအားကောင်းတဲ့ဆေးတစ်ခုပါ။ ဒါကသူတို့တစ်တွေ reboot အဘို့အဘယ်သူမျှမကဆိုပါတယ်! ငါထင်တာကတော့သင်တို့ထဲကအချို့သော LONG rebooters တွေအတွက်တော့သူတို့ဟာရိုက်ချက်တစ်ခုရထိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့်ငါလိုမင်းလိုမင်းမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ဖူးလား၊
ငါ့ကိုတစ်ခါတလေငါတကယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းသောတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူသင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ကို "ဒီနေရာမှာဆွဲထားပါ" ဟုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။ အကယ်၍ ဒီအသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ဟာဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုး၊ လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွေ၊ တစ်နှစ်တာလုံးကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ ပုံပန်းသဏ္outာန်ကင်းမဲ့ခြင်းများကိုကျော်လွှားနိုင်လျှင်သင်ဟာသင့်ကိစ္စရပ်များကိုကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ်မှ Link ကို